Malezia: Aiza ny Fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety amin’izao fotoana izao? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2010 9:39 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Italiano, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Raha navoaka aloha tamin'ity taona ity ny famantarana farany ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, mailaka ery ireo mpanao politika mpanohitra nanao hetsika tamin'ny alalan'ireo vavahadin-tseraseran'ireo antoko amin'ny aterineto sy ireo bilaoginy manokana. Nihamafy ny kian'izy ireo tamin'ny aterineto raha vao taraiky ny governemanta amin'ny fanapahan-keviny mikasika ny hanavaozana indray ny lisitry ny mpanohitra , ary niteraka fotoana feno hatezerana sy fanaratsiana tamin'ny alalan'ny haino aman-jery amin'ny aterineto ny fanafoanana ireo sary miaina fandranitana ara-politika. Mamaly toy izao i Lai, mponina :
Ny mahaliana, ankoatra ny tetik'ady ara-tserasera hanakianana ny sivana, dia nandray fanapahan-kevitra mbola tsy nisy nanao hametraka ny Fahalalahana hahazo sy hampiely vaovao ny mpitarika ny mpanohitra iray, volavolan-dalàna hanokafana ny vaovao natokana ho an'ny seha-pitantanana ho hitan'ny rehetra. Hoy i Anil raha tsy faly amin'ny solontenan'ny governemanta nandà ny volavolan-dalàna izy :
Koa satria moa miparitaka izaitsizy ny vavahadin-tserasera mahaleo tena sy ny fampitan'olo-tsotra vaovao, mamisavisa toy izao i Gopal Krishnan :
Farany , tsy zavatra izay tapahan'ny governemanta na ireo antoko mpanohitra amin'ny tsy misy antony akory ny fahalalahana amin'ny asa fanaovan-gazety, fa mikasika ny mponina izay mangataka ny marina sy ny mpanao gazety izay te hitatitra ny marina ihany koa . Araka ny nolazain’ i Athan: